သူအို၊ သူနာ၊ သူသေ၊ ရဟန်း၊ The aged, the sick, The dead and the monk, 老 病 死 和尚 - ရတနာဝါသ ဘုရားကျောင်း 華緬 三寶寺
သူအို၊ သူနာ၊ သူသေ၊ ရဟန်း၊ The aged, the sick, The dead and the monk, 老 病 死 和尚
Posted by ukkmaung on August 22, 2014 at 9:30am
၁၀။ သူအို၊ သူနာ၊ သူသေ၊ ရဟန်း၊ The aged, the sick, The dead and the monk, 老 病 死 和尚
သိဒ္ဓတ္ထမင်းသည် သက်တော် ၂၈နှစ်သို့ ရောက်သောအခါ၊ တစ်နေ့တွင် ဥယျာဉ်သို့ တောကစားထွက်သည်။ နတ်တို့က ဖန်ဆင်းပြသဖြင့် လမ်းခုလတ်တစ်နေရာတွင် သူအိုကို တွေ့သည်။ " လောက၌ မွေးဖွားလာသူမှန်သမျှ အိုရမည်သာတကား " ဟူ၍ သံဝေဂရကာ နန်းတော်သို့ လှည့်ပြန်လေသည်။
လေးလကြာသောအခါ ဒုတိယအကြိမ် ဥယျာဉ်သို့ ထွက်ပြန်သည်။ လမ်းတွင် သူနာ တစ်ယောက်ကိုတွေ့သည်။ " နာခြင်းသဘောကို မည်သူမျှ မလွန်ဆန်နိုင်ပါတကား" ဟု သံဝေဂရပြန်၍ နန်းတော်သို့ ပြန်ခဲ့ပြန်သည်။
နောက်လေးလကြာသောအခါ သိဒ္ဓတ္ထမင်းသည် တတိယအကြိမ် ဥယျာဉ်တော်သို့ ထွက်ပြန်သည်။ လမ်းတွင် သူသေကို တွေ့ပြန်သည်။ " အိုခြင်း၊ နာခြင်း၊ သေခြင်း သဘောကို မည်သူမျှ မလွန်ဆန်နိုင်ပါတကား၊ သည်လောကတွင် အို၊နာ၊သေ ဘေးမှ လွတ်မြောက်ရာ နည်းလမ်းမရှိတော့ပြီလော။ သည်ဘေးတို့မှ ငါလွတ်မြောက်ချင်စမ်းပါဘိ" ဟုဆိုကာ နန်းတော်သို့ ပြန်ခဲ့သည်။
နောက်လေးလကြာသောအခါ၊ စတုတ္ထအကြိမ် ဥယျာဉ်သို့ ထွက်ပြန်သည်။ သည်အချိန်၌ကား ရဟန်းတစ်ပါးကို တွေ့ မြင်သည်။ " ရဟန်းအဖြစ်သည် ကောင်းမြတ်ပေစွ" ဟု ကျူးရင့်မိသည်။
10။ The aged and the sick
Prince Siddhatta reached the age of twenty eight and one day he went to the royal garden and atacertain place he saw an aged man who was created and shown by the gods.
" In this world who ever was born is susceptible to old age, " thus becoming agitated he returned to the palace.
After four months, for the second time. He went to the royal garden and on the way sawasick person.
" No one can go against sickness, "thus he again become agitated and returned to the palace.
11. The dead and the monk
Felling much depressed and agitated he said, " No body cam overcome the nature of oldness, sickness and death? Is not there any means of escape from old age , sickness and death? I want to be free from these dangers," and returned to the palace.
After four months he again went to the garden and on the way beheldamonk. Uttering praise of the monk thus, " Monkhood is noble".
王子悉達多 (巴Siddhattha) 達到28歲時，有一天他去了皇家園林，並在某一個地方，他看到誰被創建和神靈所示的中年男子。